Carry phambili esele credit ezijikelezayo, ibhalansi uthishanhloko
トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ Carry phambili esele credit ezijikelezayo, ibhalansi uthishanhloko
Isenzo sokunqophisa wathumela ngolunye usuku uma yezitolo ezikhanyisayo credit, kunamaphuzu ahleliwe "Okusele oyinhloko" futhi "Okusele baphathe-phezu kwakho". Uma sikubeka kalula, baphathe phambili esele esikweletini, kuhlanganise isithakazelo oyokwenziwa phezu enyangeni elandelayo, ibhalansi oyinhloko libhekisela uthishanhloko okwamanje isimo ezingakhokhwanga.
bayaqhubeka phezu esele kanye nemali esele oyinhloko, kodwa amabili iye yachazwa ngokuvamile "zokugcina yokukhokha yingasiphi isikhathi, kulesi sikhathi isikhathi inkokhelo". Ngamanye amazwi, nje ngokubheka sebhithi nyangazonke, kumele bakwazi ukuqonda ibhalansi sife-phezu kanye nokulinganisela oyinhloko lancipha ngalesisikhathi yenkokhelo.
Ngokwesibonelo, ake sithi wena selikhokhe 5,000 yen + ikhomishana njalo ngenyanga e ezikhanyisayo credit. Khona-ke, kubonakala iye yachazwa ezinhlwini ezingu yakamuva ukusetshenziswa esifakiwe, "owedlule ngenyanga sife-phezu ukulingana 48.000 yen", "ngenyanga ezayo sife-phezu ukulingana 45,000 yen". Kulokhu, by ngenyanga lokukhokha, 3, 000 izikweletu yen ngeke kusho ukuthi yehlile.
ku ukwenza uhlelo ukubuyiswa kwemali, ungavumeli kubalulekile ukuze baqonde ibhalansi sife-phezu kanye nokulinganisela oyinhloko. Kanye izikweletu zamanje, okuyiwona futhi ulwazi olungase ukuqonda isimo ukubuyiswa kwemali, ake ukuhlola nakanjani njalo ngenyanga.
inkomba | ngokuya ezikhanyisayo ukutusa Amanothi
oyinhloko flat-rate ezikhanyisayo mshini wesikweletu ezikhanyisayo is, Ya umthengi ezezimali ukuthi sebemukele "Uthishanhloko flat-rate ezikhanyisayo indlela" izinkampani zekhadi lesikweletu nazo ngokuvamile kubonakala. Lokhu kungenxa yokuthi, ngaphezu uthishanhloko inyanga ngayinye nani, lisho isimiso, ezifana ozokhokhela inzalo elafika isikhathi ngasinye.
Kufanele kuqashelwe kule ndlela ukubuyiswa kwemali, kuba ukuthi ibhalansi oyinhloko ibhalansi eyenziwa phambili kukhona kungenzeka ukuthi "akubandakanyi ikhomishana senzalo". Ngaphezu kwalokho, endabeni ukusetshenziswa entsha ikhadi emva umnqamulajuqu of the sebhithi, ulwazi esitatimendeni sakamuva akuvezi. Ngakho-ke, nalabo abafuna ukuhlola ethize isimo wokuboleka bese buyiselo simo, kubalulekile ukukhetha indlela ukuxhumana izinkampani ezezimali umthengi kanye credit card.
inkomba | notation ukunakwa
eyenziwa phambili esele noma ibhalansi eziyinhloko ukumelwa kohlelo ukubuyiswa kwemali of ezikhanyisayo credit inkomba
phezulu ikhasi 'athwale-phezu ibhalansi likathishanhloko ibhalansi ", lapho izinkampani ezezimali umthengi kanye credit card ezahlukene. Ngokwesibonelo, sekuwumkhuba "inkokhelo odlule emva ibhalansi sife-phezu kwakho", kungenzeka ukuthi noma ziye nje kuchazwe ngokuthi "oyinhloko" ukulinganisela oyinhloko. Ngenxa yalesi sizathu, ngalokho into ngayinye of the sebhithi yilokhu ubuqonde, kubalulekile ngokuqinile ukuqonda.
ikakhulukazi endabeni ezikhanyisayo credit, ingasetshenziswa izikhathi eziningana lokukhokha nyangazonke isamba ngeke kushintshe kakhulu, kukhona inkinga ukuthi kuba nzima ukuwaqonda ibhalansi eliye lasetshenziswa kuze kube manje. Yize bengingeke zisebenzisa credit kakhulu ezijikelezayo wedwa, kusimangaze baba ezibizayo ukuze "kunaleso esilindelekile Uma ezifana isisu ... "akuyona ezimbalwa futhi. Ukuze siqonde nyangazonke isimo wokuboleka bese buyiselo isimo kusukela
esifakiwe, yebo, ake njalo ukuhlola ukuthi uhlelo ukubuyiswa kwemali kanye shift livelile cha.